Lapho kuqala kubanda kukhona amacala Umkhuhlane ne-acute nezifo zokuphefumula. izimpawu Cold - ukukhwehlela, amakhala yisisu, umphimbo obuhlungu - ukususwa esikhundleni kabi zidinga ngokushesha, ikakhulukazi ezinganeni. kwemithi Modern inikeza lenqwaba izidakamizwa e amaconsi futhi izifutho, ukuxazulula le nkinga. Esanda kutholakala bavele emakethe Russian umuthi Lokudabuka German "Snoop" izingane, kuba vasoconstrictor, okubandakanya emanzini asolwandle, xylometazoline.
Ngo-January 2009, phakathi inkampani eyenza imithi STADA CIS imikhiqizo, umuthi omusha, yakhelwe ukuba alwe rhinitis. Phakathi kwezinye izindlela, emelelwe emakethe weenhlahla, spray German "Snoop" (izingane kanye nabantu abadala) iyona xylometazoline lokuqala equkethe, esiklanyelwe ukuqeda ukuvuvukala kanye lula ukuphefumula. A amanzi usawoti isekela isimo bokuphila we nasopharynx lwamafinyila. I umuthi ngokushesha kusiza ukuphefumula acinene, umphumela walo kubonakala kusukela imizuzu lokuqala lokusebenza.
emaphaketheni Plastic ngesimo spray kunikeza iphatheke kalula futhi zikhululekile kwekhala ngesikhathi esikahle futhi kunoma iyiphi indawo, ngaphezu, le ndlela ivumela nokushintsha kokudla nokufakwa eqondile okusamanzi kanye nombala nisela ngalo ingaphakathi acinene. Omama abaningi abasha banconywa izidakamizwa "Snoop" ingane, ukubuyekezwa ukuthi babeshaye esikhonkosini.
Kusho "Snoop" (spray) isetshenziswa ukuze akhulule:
acute rhinitis iguliswa;
izifo sibi zokuphefumula wabonakaliswa rhinitis.
Dedela spray wenziwa imithamo ezimbili:
Ezinganeni ezineminyaka engu-6 kanye nabantu abadala - Futha "Snoop 0.1%."
Ezinganeni iminyaka 2-6 - Futha "Snoop 0.05%."
Ngemuva kokufaka isicelo umphumela izidakamizwa lihlala kufika emahoreni angu-10, okuyinto kuyivumela ukungasebenzisi - hhayi izikhathi ezingaphezu kuka-3 ngosuku.
Baby lehla "Snoop": indlela eyinhloko isandla
Isixazululo okulungiselelwe emanzini asolwandle. Lolu ketshezi luhlanzekile futhi alinawo nezivimbelakuvunda.
Cishe ngokuphazima kweso futhi ngesikhathi esifanayo nomphumela owaqhubeka isikhathi eside.
Ukusebenza kahle okusezingeni eliphezulu - omunye isitsha equkethwe 15 ml 166 Ukweqiwa.
ibhodlela Unbreakable nge isifutho elula.
Inani kanye contraindications of the izidakamizwa
Ngaphansi izindleko eliphusile fafaza "Snoop" izingane (wentengo liyashintshashintsha kusuka 130 ruble Russian) has a ukusebenza kahle ngokwanele okusezingeni eliphezulu.
Kufanele uyoshiywa noma kusetshenziswe ngokuqapha imithi uma kukhona:
ukuhlinzwa esikhathini esidlule ku meninges;
rhinitis atrophic ;
liphinyiselwe isifo sokuqina kwemithambo yegazi;
Indlela yokufaka isicelo amathonsi abadala. "Snoop" izingane: yokusetshenziswa
Izingane abaneminyaka engamashumi 2-6 kufanele injected ngokucindezela 1 Ikani "Snoop 0.05%" e ikhala ngamunye kungekho izikhathi ezingaphezu kuka-3 ngosuku.
Izingane ezineminyaka engu-6 kanye nabantu abadala kumelwe sinisele ingaphakathi acinene kanye fafaza "Snoop 0.1%" izikhathi 3 ngosuku.
Ukusebenzisa izidakamizwa is hhayi Kunconywa izikhathi ezingaphezu kwezintathu ngosuku. Ubude yokwelashwa engafinyelela kwengu-1 ngesonto.
Ngokushesha ngaphambi kokuba zisetshenziswe, kufanele ahlanze ingaphakathi acinene. Akubalulekile fafaza kwezidakamizwa isikhathi esijana, ikakhulukazi rhinitis ezingamahlala-khona. Uma usebenzisa isifutho okokuqala, "Snoop" izingane, yokusetshenziswa kumelwe nakanjani kumele zigcinwe zikhona uma kwenzeka ukusabela iguliswa wengane noma ubuyekeze noma yimaphi amanye izici zokwelapha.
A side effect imithi
Ngekusetjentiswa isikhathi eside noma njalo kakhulu kungabangela ukoma noma ukuluma kwesikhumba we mucosa acinene, futhi uketshezi ngokweqile isikhwehlela, sneezing futhi esivuthayo. Ezimweni ezingavamile ka acinene mucosa ukuvuvukala, angaboni kahle, ukuqwasha, ukuhlanza, ikhanda elibuhlungu, umfutho wegazi ophakeme, arrhythmia, tachycardia, ukucindezeleka ngezinga elithile ukusetshenziswa eside amazinga okukhishwa esikhulu.
Lapho ohlangothini imiphumela iyakhula yokweqisa. Lapho lezi zimpawu kubalulekile ngokushesha uthintane onguchwepheshe.
Ukuqokwa kwe-acinene fafaza ezinganeni ezincane
Ngaphambi kokuqhubeka ekwelapheni ingane, kumelwe ufunde imiyalelo ngokucophelela. Okuvamise ukusetshenziswa ngabantu abadala izifutho kubonakale kungenangozi, kodwa izingane engafinyelela kwengu-1 noma ngisho engu-2 kuthiwa ngokuphelele contraindicated. Futha "Snoop" izingane ngezilinganiso ezincane izingane sabelwe engu-2, mhlawumbe ngaphambi kokuthatha bonana nodokotela wakho. Ngazishaya indiva imiyalelo kungaba impilo womntwana, ngakho ukwelashwa nokuwubuwula of umkhuhlane kungaholela emiphumeleni engathí sina kakhulu futhi inkinga we ngezimo zesiguli abasha.
ekhaleni stuffy ngesikhathi sokukhulelwa - indlela ukuba?
Kaningi, lapho acinene ukuminyana abadala bona uthathe wena izindlela eziphumelelayo: .. Drops, izifutho, njll Nokho, ngesikhathi ekhulelwe, bonke ngokuphelele ezahlukene, ngokuzimela linqume Cabanga nje, yini ngempela okuyingozi, futhi choice of izimali mncane impela. Ukuzelapha noma iseluleko abangane kulesi simo kungaba izindleko ezibizayo kakhulu ngendlela umama nengane. Kufanele kuqondwe ukuthi ukuminyana acinene kulo lonke izinyanga eziyisishiyagalolunye yokukhulelwa - lena isimo sesikhashana, futhi ngemva konke nokubeletha kuzolunga.
Eyesibili ohlangothini uhlamvu lwemali
Ikhala elivuzayo ngesikhathi sokukhulelwa kungase kungabi kuphela ezingemnandi, kodwa futhi ziyingozi. Lokhu kungaba ngenxa yokubakhona isifo egazini i umzimba, igciwane bakha olukhulu phakathi kumiswa placenta futhi viscera fetus. Kulesi sigaba, isimiso sezinzwa ngowokuqala wengane emaphakathi zingase zithinteke.
Naphezu kweqiniso lokuthi rhinitis abakhulelwe - kuwumphumela zineminyaka hormone emzimbeni kamama, futhi njengoba umthetho, akukho ukwelapha ethize liyadingeka, namanje kudingeka uqaphe. Ngokwesibonelo, kokungena emoyeni is bahlanza futhi wotha umlomo, njengoba emakhaleni ukuphefumula, Ngakho-ke, owesifazane ezingaphezu kuka ingozi ekubambeni i ezithathelwanayo noma imikhuhlane.
Akufanele sikhohlwe iqiniso lokuthi lapho acinene ukuminyana kukhona ingozi hypoxia fetus (yokushodelwa umoya), okuyilona elisebenzayo futhi kakhulu engathandeki ngoba umama nge encane.
Vasoconstrictor lehla ngesikhathi sokukhulelwa: Kungenzeka ukusebenzisa?
Kuyinkolelo eyamukelwa abaningi babekholelwa ukuthi kungaba ukuthi ukukhulelwa kuphazamisa Ungasebenzisi amathonsi acinene. Lokhu kungenxa yokuthi amathonsi ekhaleni nethonya letindzala, lokhu kusho ithonya izidakamizwa hhayi kuphela emikhunjini ezisesandleni ingaphakathi acinene, kodwa futhi wonke umzimba. vasospasm okubangelwa izidakamizwa ingase inciphise igazi engenayo ezingenzeka embungwini, futhi ngenxa yalokho, isifika anoxia. Ikakhulukazi efiselekayo ukusebenzisa amathonsi vasoconstrictive ekukhulelweni ekuseni.
Nokho, naphezu kwazo zonke lezi amaqiniso ingase ibe yiqiniso, ke ingakamiswa eyenziwa umthelela izifundo umphumela la amathonsi phezu ingane esibelethweni. Ngakho-ke ngaphambi kwesikhathi ubhekwa esiyingozi kwabesifazane abakhulelwe kusho.
Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kusale amakhala yisisu ngaphandle kokwelashwa futhi akunjalo, ngoba uma umama kunzima ukuphefumula, ngokulandelana, futhi ingane izizwa ukuntuleka komoya-mpilo. Ngakho-ke, ngokusekelwe umlando umama esizayo futhi isimo sakhe samanje, udokotela wakho angase aqhubeke linqume izidakamizwa "Snoop" kumntwana ngesikhathi sokukhulelwa. Sebenzisa-ke kumele ibe mifisha futhi ngaphandle ngokweqile kakhulu, ngokuqinile ngokulandela imiyalelo of onguchwepheshe. Akunakusetshenziswa musa ukwandisa isilinganiso semithi oyidlayo noma imvamisa kwesicelo.
Kulinganiselwa kohlaziyo, ngo-2009 emakethe Russian ezithaka imithi phakathi vasoconstrictor izidakamizwa ngoba rhinitis uvele amagama uhwebo olusha 35. Ngo inkampani yemincintiswane STADA CIS ngakwazi ukuletha emakethe yasekhaya i eseyintsha ngokuphelele, lesi sidakamizwa "Snoop" izingane (0.05%) kanye abadala (0.1%), okuyinto ngo-2009 zenzeka yesibili eziyishumi yokuthengisa ku ingxenye yalo . Impumelelo sha kungenxa undoubted izinga umkhiqizo ngemali ephansi impela. Ake bathemba ukuze uthole okunye ukuthuthukiswa ngempumelelo sha, okuyinto Kwakuyohlanganisani ukudalwa imikhiqizo emisha ephezulu ukusebenza.
Lapho afundela Harry Potter? abasebenzi Hogwarts
Ukufanisa simo - kuzovumela ukuhlobisa umkhosi ukuzalwa umndeni omusha